Debian 6 nwụnye usoro site nzọụkwụ | Site na Linux
Debian 6 nwụnye nzọụkwụ site nzọụkwụ
Na ohere a, anyị ga-ahụ otu esi etinye Linux Debian 6. Anyị ga-amalite na obere ozi izugbe na nke anyị, nke ndozi nke a nnukwu distro, na screenshots gụnyere maka a mma ihe ngosi nke ọ bụla paso.
Dany Rey bụ otu n'ime ndi mmeri site na asọmpi anyị kwa izu: «Kesaa ihe ị maara banyere Linux«. Ndeewonu! Na-echegbu onwe banyere iji kere òkè ma nye onyinye gị nye obodo, dịka Dany mere?
Dabere na wiki gọọmentị, Debian Linux bụ sistemụ arụmọrụ n'efu, nke ihe karịrị otu puku ndị ọrụ afọ ofufo mepụtara gburugburu ụwa, ndị na-emekọ ihe ọnụ na Internetntanetị.
Nraranye nke Debian maka sọftụwia n'efu, ntọala nke afọ ofufo ya, ọdịdị ya na-abụghị nke azụmahịa, yana ụdị mmepe mmepe ya mere ka ọ dị iche na nkesa ndị ọzọ nke GNU sistemụ arụmọrụ. A na-achịkọta akụkụ ndị a na ndị ọzọ na oku Nkwekọrịta Debian.
A mụrụ ya na 1993, n'echiche nke imepụta usoro GNU site na iji Linux dịka kernel. N'aka nke ya, ọrụ Debian, nzukọ na-ahụ maka ndozi ya taa, na-emepe usoro GNU dabere na kernels ndị ọzọ (Debian GNU / Hurd, Debian GNU / NetBSD na Debian GNU / kFreeBSD).
Otu ebumnuche ya bụ ịkewapụ sọftụwia n'efu na sọftụwia anaghị akwụ ụgwọ n'ime ụdị ya. N'adịghị ka distros ndị ọzọ, usoro mmepe ahụ nwere onwe ya na nnukwu ụlọ ọrụ: ọ bụ ndị ọrụ n'onwe ya mepụtara ya, na-enweghị dabere n'ụzọ ọ bụla na mkpa azụmahịa. Debian anaghị ere sọftụwia ya ozugbo, ọ na-eme ka ọ dịrị onye ọ bụla na Internetntanetị, ọ bụ ezie na ọ na-ahapụ ndị mmadụ ma ọ bụ ụlọ ọrụ ka ha kesaa ngwanrọ a ahịa ma ọ bụrụhaala na a na-asọpụrụ ikike ya.
Enwere ike itinye Debian Linux site na iji usoro nrụnye dị iche iche, dịka DVD, CD, Blu-Ray, osisi USB na diski diski, ọbụnakwa na ntanetị.
Budata Debian GNU / Linux
Nzọụkwụ nzọụkwụ site na ntinye + nkọwa dị nkenke ..
Nke a bụ ihe mbụ na ihuenyo anyị ga-ahụ mgbe anyị buut .. anyị họrọ Grphical Install
Mgbọrọgwụ paswọọdụ ...
Aha njirimara maka ndị ọrụ na-abụghị ndị ọrụ.
Gafere onye ọrụ e kere na aga na nzọụkwụ .. onye ọrụ adịghị admin
Na nke a, anyị kwadebere HDD iji gwa onye nhazi ụdị ụdị nkewa ... ebe ọ bụ na anyị n'ozuzu ya, anyị na-enye nhọrọ nke diski niile ... mana ọ bụrụ na anyị nọ na igwe anụ ahụ, anyị na-ahọrọ akwụkwọ ntuziaka ma họrọ oghere n'efu mbụ kee ...
Anyị na-ahọrọ diski ka nkebi.
Anyị na-ahọrọ nhọrọ nke mbụ ebe ndị ọzọ bụ maka ndị ọrụ nwere obere ahụmahụ karịa ebe anyị nwere ike ịmepụta ọtụtụ nhọrọ ...
Na ihuenyo a anyị na-achọ ikwenye ederede nke mgbanwe na disk ... (ị maara ugboro ole m tụfuru ihe niile mgbe m malitere na Linux n'oge afọ 98/99 lol)
Anyị na-ekwu ee, ebe ọ bụ na anyị bụ ma ọ bụ na anyị ga-abụ ezigbo ndị nchịkwa Linux ma anyị ji n'aka nke nhọrọ ahọpụtara hehe
Anyị họrọ na mba ma gaa n'ihu ...
Anyị họrọ na mba ma gaa n'ihu ... (enwere obere aka ekpe)
Na ihuenyo a, anyị na-ahọrọ nzube nke ihe nkesa anyị ... ya bụ, ọ bụrụ na ọ ga-abụ sava ozi, ftp, mbipụta, ssh, wdg.
Workgroup aha maka samba (ịkekọrịta faịlụ)
Anyị chọrọ ide grub (linux bootloader) na diski? anyị na-ekwu ee ...
Anyị mere ya !!!!! echichi e mechara ok !!
Anyị na-ahụ anyị hụrụ n'anya GRUB ...
Daalụ Rey daalụ!
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Faịlụ FileLet jiri » Debian 6 nwụnye nzọụkwụ site nzọụkwụ
Ezigbo Santiago, echere m na ị nyochaghị nhọrọ gburugburu ebe obibi desktọọpụ oge windo na mmemme iji wụnye wee pụta, mana ọ bụghị njedebe ụwa ị ga-etinye desktọọpụ. Echere m na mgbe ịmalitere pc ya, ọ ga - ejedebe na njedebe, mgbe ahụ ị ga - abanye dị ka onye ọrụ kachasị, ihe dị ka nke a:
okwuntughe, mgbe ahụ ị ga - enweta akara ngosi # ebe ị ga - eme nke a;
# apt-get install (desktọọpụ kachasị amasị gị) ma chere ruo mgbe ọ wụnye na voila
Zaghachi Orlando Hernandez
Ndewo d4ny mgbe ị nwere oge m ga-achọ ka ị nye m aka ebe ọ bụ na ụbọchị ole na ole gara aga, m wụnye debian 6 na-eso nkuzi ị hapụrụ, mana enwere m nsogbu mgbe m chọrọ ịwụnye ndị ọkwọ ụgbọ ala maka kaadị ikuku m ..
Ana m echere azịza gị .. Ma site n'ụzọ nkuzi dị ezigbo mma ...
Zaghachi Luis Alexis Fabris
Ndewo nu mmadu nile, enwerem nsogbu. Mgbe m mechara nwụnye, mgbe m regharịrị, Debian anaghị agbapụta nke ọma. Ihe m na-eme?
Zaghachi Santiago Corvalán
Ndewo oma nye mmadu niile. Ọ bụ oge mbụ m na-akpọtụrụ oghere a. M na-ajụ n'ihi na enwere m obi abụọ. Kedu ụdị ụdị Debian ka ị kwadoro? N'ihi na aguru m na onwere nke kwụsiri ike, ule ozo, na ihe ozo emeela m otutu ihe mgbagwoju anya. Ma mgbe ị na-achọ ibudata ya, rịba ama na ọ na-ekwu dvd 1, dvd2, dvd3: ma ọ bụ cd1, cd2 ... na eziokwu bụ na anaghị m aghọta ọtụtụ ihe ma ọ bụ nke m kwesịrị ibudata. Abụ m onye rookie, mana ọ bụghị nke ahụ, hehe. Daalụ maka oge gị. !!!
PS: Esi m Ubuntu. N'oge a edere m na Linux Mint 14. Achọghị m Ubuntu ọzọ, ma chọọ ịnwale ha kwesịrị, ugbu a ana m ebudata Mepis na Linux Mint dabere na Debian.
Zaghachi Emanuel Jorge Malfatti
Ndewo, m na-etinye debian 7.2 na mgbe m ga-etinye nwụnye, ọ tụbara njehie na enweghị ike ịwụnye grub, emesịa, m na-anwa ịwụnye LILO mana ọ tụkwara njehie, gịnị na-eme? -Otu: M na-etinye debian site na virtualbox -2º mara: debian m na-achọ ịwụnye na-abịa na GNOME gụnyere debian na .iso
Ọ naghị arụ ọrụ mgbe ị wụnye linin debian 7.5.0 ọbụnadị 7.6.0 anaghị agwa m na ọ hụghị buut
Daalụ maka nkuzi ahụ, ọ bara ezigbo uru.
Magburu onwe ya, linux download ga-agwụ n'oge na-adịghị anya; M na-echekwa njikọ ahụ maka nyocha ọzọ. Have nwere ihe metụtara akụrụngwa, nchekwa na wdg ... ???
Ndewo, m ga-asị na abụ m newbie ka debian 6.0.6 na enwere m ọtụtụ nsogbu kemgbe ethernet na wifi n'ọdụ ụgbọ mmiri nke akụrụngwa m anaghị arụ ọrụ na akpaghị aka, enweghị m ike ịlele ihe nbudata ma wụnye mmemme ọhụrụ, mmadụ nwere ike inyere m aka na nke ahụ?
Ndi Microsoft na emekota na Linux ???